‘प्रेम गीत २’ का निर्माता सेन भन्छन्, ‘फिल्म हेरेपछि मलाई सराप्छन्’ « Ramailo छ
‘प्रेम गीत २’ का निर्माता सेन भन्छन्, ‘फिल्म हेरेपछि मलाई सराप्छन्’
तेश्रो फिल्मसम्म आइपुग्दा निर्माता सन्तोष सेन कलाकार पनि भएका छन् । साउन १३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘प्रेम गीत २’ मा निर्माता सेनले अभिनय गरेका छन्, त्यो पनि भिलेन भएर । पहिलो पटक अभिनय गरेका निर्माता सेनले फिल्ममा कस्तो काम गरेका होलान् त ?
सोमबार प्रोमो रिलिज गर्न आयोजना गरिएको प्रेसमिटमा निर्माता सेनले आफुले फिल्ममा दर्शकबाट गाली आउने भूमिका गरेको खुलाए । निर्माता सेनकै भनाई अनुसार उनले फिल्ममा भिलेनको भूमिका निभाएका छन्, त्यो पनि दर्शकले सराप्ने । ‘मलाई प्रदीपको फ्यानहरुले चाहिं सराप्न सक्छन्’, निार्माता सेनले प्रेसमिटमा हाँस्दै भने, ‘जे होस् दर्शकले मलाई फिल्म हेरेपछि पनि सम्झन्छन् । तर सराप्छन् ।’ आखिर कस्तो भूमिका गरे त उनले दर्शकले नै सराप्ने ? उसो त फिल्ममा आफ्नो दश बाह्र सिन मात्रै भएको निर्माता सेनले बताए । उनले यसअघि दुई फिल्म ‘चंखे शंखे पंखे’ र ‘प्रेम गीत’ निर्माण गरेका थिए ।